यात्रा | Радоје Домановић
Tag Archive | यात्रा
यसरी पहिलो दिन बित्यो, र त्यहि सफलताको साथ थप दिनहरू बिते। कुनै ठूलो महत्त्वको केहि भएन, केवल सानो घटनाहरूः तिनिहरु गम्भीर खाडल, त्यसपछि खोला; तिनीहरूले झाडीको बार र ब्ल्याकबेरी झाडीहरू विरूद्ध विद्रोह गरे; उनिहरु ले बोतलहरूमा टेके। धेरैले हात र खुट्टा भाँचे; केहीको टाउकोमा चोट लाग्यो। तर यो सबै यातना सहियो। केही बूढा मान्छेहरू सडकमा मर्नका लागि छोडिए। “उनीहरू घरमै बसेको भए पनि मर्ने थिए होलान, सडकलाई दोश नदेउ!” प्रवक्ताले अरूलाई जारी राख्न प्रोत्साहित गर्दै भने। केही साना बच्चाहरू, एक देखि दुई वर्षको उमेरका, पनि मरे।
अविभावकहरूले आफ्ना मनको पीडालाई दमनपूर्वक दबाए किनकि यो ईश्वरको इच्छा हो। “र बच्चा जति सानो हुन्छ, शोक पनि त्यति कम हुन्छ। जब उनीहरू कम उमेर हुन्छन् शोक कम हुन्छ। जब उनीहरू विवाह गर्ने उमेर पुगेका हुन्छन, भगवानले आमाबाबुलाई उनीहरूका बच्चाहरूलाई कहिल्यै हराउने अनुमति दिनुहुन्न। यदि बच्चाहरू यही नियती छ भने, यो उत्तम छ कि उनीहरू चाँडै मरे। त्यसो भए दु: ख त्यति ठूलो हुँदैन! ”प्रवक्ताहरूले उनीहरूलाई फेरि सान्त्वना दिए। केहि टाउको वरिपरि कपडा बेरे र आफ्नो चोट मा चिसो पट्टी लगाये। अरूले हतियार बोके। सबैको च्यतिएको कपडा र सरिर काटिएको थियो। उनीहरूको लुगा बिग्रिएको थियो, तर तिनीहरू खुशीसँग अगाडि बढे। यी सबै सहन सजिलो हुने थियो यदि उनीहरू धेरै भोकले ग्रस्त नभएको भए।तर उनिहरु अगाडि बढ्नै पर्थ्यो।
एक दिन, केहि महत्त्वपूर्ण भयो।
समूहमा बहादुर पुरुषहरु द्वारा घेरिएको नेता अगाडि हिंडिरहेको थियो। (ती मध्ये दुई हराइरहेका थिए, र कसैलाई थाहा थिएन कि तिनीहरू कहाँ थिए। यो उनीहरूको सामान्य धारणा थियो कि तिनीहरूले आफ्नो उद्देश्य त्याग्य र भागे। एक अवसरमा प्रवक्ताले उनीहरूको लाजमर्दो देशद्रोहको बारेमा केही भने। केहीले मात्र विश्वास गरे कि ती दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। बाटो, तर तिनीहरूले अरूलाई अरूलाई नजगाउन उनिहरु ले आफ्नो धारणा कसैलाई भनेनन) समूहको बाँकी लाइन पछाडि पछाडि थियो। अचानक त्यहाँ एउटा ठूलो र गहिरो, चट्टानी खाइ देखा पर्‍यो – एक वास्तविक खाडल। ढलान यति ठाडो थियो कि उनीहरूले अगाडि बढ्ने हिम्मत गरेनन्। सबै भन्दा बहादुर मनिस हरु पनि एक्छिन रुकेर आफ्नो नेता तर्फ हेरे।
तल झर्दै, आफ्नो टाउको तल गर्दै विचारहरु मा लीन, उसले साहसपूर्वक अगाडि बढ्यो, आफ्नो लट्ठी अगाडि टक टक पार्दै, पहिले दायाँ, त्यसपछि बायाँ, आफ्नो विशेषताको साथ। धेरैले भने कि यो सबै बाट उनको अझ बढी मर्यादित ढंग देखिन्छ। उनले न त कसैलाई हेरे र न केही भने। उ छेउ छेउमा जादा समेत उसको अनुहारमा न केही परिवर्तन वा कुनै डर केही पनि थिएन। अति साहसी मानिसहरू पनि मरे तुल्य फिक्का भए, तर बहादुरी, ज्ञानी नेतालाई डर लाग्ने दिन कहिलै पनि आएन। दुई थप कदम र उ धारमा हुन्थ्यो। डरले र आँखा तर्दै, तिनीहरू सबै डरले काम्न थाले। साहसी पुरुषहरू नेतालाई बिन्दुमा पक्रेर राखेका थिए, यद्यपि यसको अनुशासन उल्लघन भयो, जब उनले एकपल्ट दुई कदम चाले र खालमा परे। त्यहाँ विलाप, विलाप, चिच्याए; डरले माथिल्लो सिमा नघेको थियो। केही भाग्न थाले।
– पर्ख दाजु भाइहरु! के को हतार हो? के तपाइँ यसरी आफ्नो वचन राख्नुहुन्छ? हामीले यो बुद्धिमान् मान्छेलाई पछ्याउनु पर्छ किनकि उसलाई थाहा छ उसले के गरिरहेको छ। ऊ आफूलाई बिगार्नको लागि कुनै बौलाहा होइन नि। उसको पछाडि लाग, यो सबैभन्दा ठूलो र हुनसक्छ अन्तिम खतरा,अन्तिम बाधा हो। कसलाई थाँहा छ? हुनसक्छ यसको अर्कोपट्टि हामीले एउटा भव्य, उर्वर भूमि भेट्टाउनेछौं जुन भगवानले हाम्रोलागि भनेर राख्नु भएको छ। अगाडि बढ! त्याग बिना, हामी यहाँ केही प्राप्त गर्ने छैनउ! – त्यस्ता प्रवक्ताका सल्लाहका शब्दहरू थिए र दुई कदम अगाडी अघि बढ्यो ऊ पनि खोलामा अदृष्य भयो ।बहादुरले पछ्याई सके पछि सबैजना भित्र कुदे।
यो विशाल घाँसको ठाडो भिरालोमा विलाप, लड्दै, विलाप गरिएको थिए। कसैले शपथ खाएको थियो कि कोही पनि जीवितै बाहिर निस्किने छैन, वा कम्तिमा चोटपटक नलागेर अथवा एक टुक्रामा, तर मानव जीवन कठोर छ। नेता असाधारण भाग्यशाली थिए। ऊ घोप्टो परेको थियो र झाडी मा टगिएको थियो। ऊ आफैंलाई सँगै बाहिर तान्न सफल भयो। ऊ विलाप गर्दा गर्दै र रुँदै तल गयो, ऊ स्थिर, चुपचाप बस्यो। रिसले चूर भएका केहीले उसलाई सराप्न शुरू गरे तर उनले कुनै ध्यान दिएनन्। जो भाग्यमानी झर्ने क्रममा झाडी वा रूख समात्न सक्षम भएका थिए बाहिर जानको लागि कडा प्रयत्न गर्न थाले। कसैको टाउकोमा क्र्याक थियो त्यसैले तिनीहरूको अनुहारबाट रगत निस्किरहेको थियो। त्यहाँ नेता बाहेक कोही पनि सही सलामत थिएनन। तिनीहरू सबै अचानक उनलाई देखेर पीडाले कराए तर उसले आफ्नो टाउको समेत उठाएन। उनी मौन थिए र एउटा ॠषि को प्रतिबिम्बित पोज लिए।
केही समय बित्यो। यात्रुहरूको संख्या दिनदिनै साना हुँदै गइरहेको थियो। प्रत्येक दिन मृत्‍यु को सन्ख्या बढ्दै थियो। केही समूह छोडेर फर्किए।
ठूलो संख्यामा सुरु भएको, लगभग बीस जना मात्र बाँकी छ। तिनीहरूको थकित अनुहारहरूले निराशा, शंका, थकान र भोकका लक्षणहरू दर्शाउँछ, तर कसैले पनि एक शब्द भनेको छैन। तिनीहरू आफ्ना नेता जत्तिकै मौन थिए र सुस्त थिए। उत्साहित प्रवक्ताले पनि आफ्नो टाउको हल्लाए। सडक वास्तवमै गाह्रो थियो।
तिनीहरूको संख्या दिनहुँ घट्यो जब सम्म त्यहाँ दश मात्र बाँकी रहे। निराश अनुहारहरूको साथ, तिनीहरू केवल कुराकानीको सट्टा विलाप र गुनासो गरे।
तिनीहरू साधारण मानिसहरू भन्दा अपाङ्ग बढी देखिन्थे। केही बैसाखीहरूमा थिए। केहीले आफ्नो हत्केला घाँटीमा टाङेर राखेका थिए। उनीहरूका हातहरूमा असंख्य पट्टि र प्याडहरू थिए। यदी उनीहरू नयाँ बलिदान दिन चाहन्थे भने पनि उनीहरूले त्यसो गर्न सक्दैन थिए किनकि कुनै नयाँ घाउको लागि उनीहरूको शरीरमा करीव ठाउँ नै थिएन।
तिनीहरूका बीचमा सब भन्दा बलियो र साहसी पनि विश्वास र आशा गुमाइसकेको थिए तर उनीहरू अझै संघर्ष गरिरहेका थिए; त्यो नै हो, तिनीहरूले कुनै न कुनै तरिकाको साथ ठूलो प्रयास संग गुनासो, पिडा ले छटपट गर्दै आघी बड्दै थिए। तिनीहरूले पछाडि जान नसक्ने भए के गर्न सक्थे? यति धेरै त्याग र अब यात्रा त्याग्न?
गोधूलि साझ ओर्लियो। बैसाखी को सहारामा जादै गर्दा, तिनीहरूले अचानक देखे कि नेता अब उनीहरूको अगाडि थिएनन्। अर्को चरण र तिनीहरू सबै अर्को खोलामा डुबे।
– ओह, मेरो खुट्टा! ओह, मेरो हात! – विलाप र कराउनको आवाज मिसियो। एउटा कमजोर आवाजले योग्य नेतालाई सराप्यो तर चुप लाग्यो।
जब घाम उदायो, त्यहाँ नेता आएर बस्यो, तेसै गरी जुन दिन उसलाई चुनिएको थियो। उसको रुपरंगमा कम्तिमा पनि परिवर्तन भएको थिएन।
प्रवक्ता बेंसीब चढे र त्यहाँ दुई अन्य व्यक्ति थिए। बिग्रेको र रगतपूर्ण, तिनीहरू कतिजना बाँकी रहेको छन भनेर हेर्न फर्के, तर केवल तिनीहरू मात्र थिए। प्राणघातक भय र निराशाले तिनीहरूको हृदय भरियो। क्षेत्र अज्ञात थियो, पहाडी, चट्टानी – कुनै बाटो थिएन। दुई दिन अगाडि उनीहरू सडकमा देखेका थिए तर छोडे। नेताले उनीहरूलाई त्यस्तै अगुवाई गरे।
उनीहरू धेरै साथीहरू र आफन्तहरूको बारेमा सोच्थे जो यस दु:खद यात्रामा मरेका थिए। उनीहरूको लङगडो अंगहरूमा दुखाइ भन्दा कष्टको अनुभवले तिनीहरूमाथि विजय हासिल गर्यो। तिनीहरूले आफ्नै आँखाले आफ्नै विनाश देखेका थिए।
प्रवक्ता नेताको नजिक गए र पीडा, निराशा र तीतोपनले भरिएको थकित, काम्दै आवाजले बोल्न थाले।
– अब हामी कहाँ जाँदैछौं?
नेता मौन थियो।
– तपाई हामीलाई कहाँ लैजानुहुन्छ र तपाईले हामीलाई कहाँ ल्याउनु भयो? हामी त्यस बाँझो भूमिमा विनाशबाट बच्न सक्छौं भन्ने आसामा हामीले आफूलाई र हाम्रा परिवारहरूलाई तपाईंको हातमा राख्यौं र हामी तपाईंको पछि लाग्यौं र हाम्रो घर र हाम्रा पुर्खाहरूको चिहानहरू भएको ठाउँ छोड्यौ। तर तपाईंले हामीलाई खराब तरिकाले नाश गर्नुभयो। तपाईको पछाडि दुई सय परिवारहरू थिए र अब हेर्नुस् त त्यहाँ कति छन्!
– तपाईको मतलब सबैजना यहाँ छैनन्? – टाउको नउठाएरै नेता बोले।
– तपाईं यस्तो प्रश्न कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ? माथि हेर्नुहोस्! गणना गर्नुहोस् हामीमध्ये कति जना यस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रामा बाँकी छौ! हाम्रो अवस्था हेर्नुहोस्! यो जस्तो अपाङ्ग हुनु भन्दा मर्नु राम्रो हो।
– म तपाईंलाई देख्न सक्दिन!
– म अन्धा छु।
एक घनघोर मौनता छायो।
– के तपाईंले यात्रामा आफ्नो दृष्टि गुमाउनु भयो?
– मेरो जन्म नै आन्धो भएको हो!
तीनै जनाले निराश भएर टाउको झुण्ड्याए।
शरद रितुको हावाले हिमालहरू भत्काउँछ र सुकेको पातहरू ओर्लन्छ। पहाडमा कुहिरो लाग्यो, र चिसो, हुस्सुले कागहरूको पखेटा फैलायो। एक बिरामी काभिंग पुनः सुरु भयो। सूर्य बादलको पछाडि लुकेको थियो जुन टाढा र टाढा हुँदै गइरहेको थियो।
तीनै जनाले एक अर्कालाई पूरै त्रासले हेरे।
– अब हामी कहाँ जान सक्छौं? – एक अस्पष्ट गम्भिर आवाज आयो।
– हामीलाई थाहा छैन!